China TPE Yoga Mat Isitolo esidayisa yonke impahla China Quality Supplier Ukukhiqiza kanye Factory | I-Tianzhihui
Umkhiqizi waseChina wamacansi we-yoga asezingeni eliphakeme ngamanani wokuncintisana. Omata be-yoga baseChina abenziwe eChina. Xhumana nathi manje ukuthola ikhotheshini yakamuva. Umphakeli onebanga lomkhiqizo ophelele ngokwanele embonini yomata ophansi eChina
Igama lomkhiqizo: Tpe Yoga Mat
Usayizi webhokisi: 51 * 40 * 63 (CM)
Umbala: Umbala oluhlaza okwesibhakabhaka omnyama, owolintshi, o-violet, oluhlaza okotshani, oluhlaza okotshani, obomvu, onsomi omnyama, opinki, ohlaza okwesibhakabhaka okhanyayo, omnyama, uLwandle oluBlue
Kumata we-yoga, amacansi e-yoga asetshenziswa kakhulu njengamanje emakethe enziwe nge-TPE ne-PVC. Omata beYoga balezi zinto ezimbili banezithameli ezithile. Kodwa-ke, kunezinzuzo eziningi zamata we-yoga ezenziwe ngezinto ze-TPE, futhi njengamanje yizinto ezithembisa kakhulu.
Izinzuzo ezingenakunqotshwa zamata we-TPE yoga.
1.Isisindo esincane: Umcamelo ngamunye unesisindo cishe esingu-1200 amagremu, okucishe kube ngama-gramu angama-300 alula ukwedlula ama-cushion e-PVC anefomu, okwenza kube lula ukuwathwala.
Ukusebenza okuhle kwe-anti-slip:izinhlayiya ezinhle futhi ezinhle zokulwa nokushelela ngemuva kokwenza. Ngisho nokujuluka ngesikhathi sokuzivocavoca, izithukuthuku eziconsela emethini, asikho isidingo sokukhathazeka ngokushelela, nomphumela wokulwa nesiliphu usahle kakhulu.
3. Izinto zithambile futhi zifanelana kahle: ukubeka phansi kufana nokuhlangana naphansi ngaphandle kokuhlanekezela.
4.Ukuqina okuqinile:Yize ubukhulu bungu-6mm, ukuqina kunamandla. Ukuyinyathela kukhululekile njengokunyathela ifu.
5. Izinto ezilungele imvelo: ayikho i-PVC, azikho izinto zensimbi, akukho phunga.
6.Iphinda isebenze kabusha: Ingaxutywa futhi iboleke ngokwemvelo ngemuva kokusetshenziswa ukugwema ukungcoliswa kwemvelo.
7. Kuhle: Ukuthungwa kwendawo kuyinto enhle, kulula ukuyifaka umbala, ngaphambili nangemuva kungadaywa ngemibala ehlukene
Incazelo: I-61 * 183cm (okunye ukucaciswa kungenziwa ngezifiso)
Ukupakisha: umbala webhande lesikhumba / ifilimu ye-OPP / ifilimu / ibhokisi elishisayo lokushisa
Izinto: I-TPE Thermo Plastic Elastome
Okuphephuli + Okuphinki
Utshani Okuluhlaza + Okumpunga
I-Violet + ebomvana
Umbala oluhlaza okwesibhakabhaka + Okuluhlaza okwesibhakabhaka
Ubomvu + violet
Uhlaza Okhanyayo Okhanyayo Ohlaza okwesibhakabhaka
Okubomvu + okumnyama
Okuphinki + Okukhanyayo Okuphinki
Okuhlaza Okumnyama + Utshani Okuluhlaza
Ukuthungwa Okuhle: imigqa ye-herringbone engaphambili inikezela ukungqubuzana okuzinzile kwesundu
Ukuthungwa Emuva: Izimpophoma zamanzi ngemuva zinikeza ukubambelela okuzinzile
Ukuphakama okukhulu kakhulu kuvumela ukubuyela emuva ngaphandle kokulahlekelwa ubukhulu
Langaphambilini Ukushaqeka kokushaqeka okungama-intshi angama-26 okubamba ibhayisikili lasentabeni
Olandelayo: Umugqa wokunwebeka wokuqina ongasheleleki we-TPE yoga mat wholesale
I-Yoga Mat Enethawula Phezulu, Isikhwama seYoga Mat sokuhamba, Isikhwama Sokuhamba seYoga, I-Thick Flooring Puzzle Ukuzivocavoca Mat, Isikhwama se-Yoga Sling, iphazili yokuzivocavoca mat,